Farmaajo oo Caafimaad Dibadda Ah Loo Qaadayo Kadib Xanuuno Soo Wajahay. – Shabakadda Amiirnuur
November 14, 2017 6:31 am by admin Views: 168
Madaxweynaha dowladda federalka ah oo maalmahan wajahayay mashquul siyaasadeed iyo qulqulatooyin amni ayaa la xaqiijiyay in uu xanuunsanayo islamarkaana la go’aamiyay in dibadda loo qaado.
Xogtan oo ay shaaciyeen warbaahinno dhowr ah oo uu kamid yahay Radio Al-furqaan ayaa ku waramaysa in madaxweynaha loo qaadayo dalka Turkiga, halka wararka qaar sheegayaan in la geynayo dalka Mareykanka.
Ilaha warkan laga soo xigtay ayaa ka gaabsaday iney faahfaahiyaan xanuunka madaxweynaha, laakin waxaa Usbuucyo ka hor baraha bulshada ku xiriirto ee Internetka lagu baahiyay Idil Farmaajo oo ah gabar madaxweynaha la dhalatay oo sheegeysa inuu wadnaha ka xanuunsanayo xilliyada qaarna uu suuxo.
Marka laga yimaado culeyska amni ee ay dowladdu kala kulmeyso Al-Shabaab ayaa waxaa sii dheer oo uu maalmihii lasoo dhaafay madaxweynuhu ka cabanayay siyaasiyiin iyo qabaa’il kasoo hor jeeda sida ay wax u wado dowladdiisa.
Maalintii shalay waxay Farmaajo dhaliil uga timid hogaamiyaha Hir-shabelle Maxamad Cabdi Waare, kaasoo sheegay in dagaalka uu madaxweynuhu ku dhawaaqay aanan laga wada tashan islamarkaana dhibaatadiisa uu isagu arkay kadib markii lagala wareegay gacan ku heynta degaanka Basra, Balcadna ay gilgilaneyso.